ဝါးခယ်မ : ဧရာဝတီကို နိုင်ဖို.ကို .....................
နေ.ရက် - ၂၀၁၅ ဇန်န၀ါရီလ ၃ ရက်
နေရာ - အောင်ဆန်းအားကစားပြိုင်ကွင်း
အချိန် - ညနေ ၄း၀၀ နာရီ
အခြေအနေ - လာအားပေးသော ပရိသတ်များ တွင် မန္တလေး ပ၇ိသတ်က ဧရာဝတီ ပ၇ိသတ်ထက် များပြားနေပြီး ကစားသမားအင်အားအနေအထားအရ ရတာနာပုံ အသင်း က ဧရာဝတီထက် သာနေသယောင်ရှိသည် ။
ရတနာပုံကို တစ်ကျော.ပြန် အမှတ်ပေးချန်ပီယံဖြစ်စေခဲ့သူ ဦးခင်မောင်တင်.က ကိုင်တွယ်ခဲ့ပြီး ဧရာဝတီကိုမူ ပထမ ကြံ.ခိုင်ရေးနည်းပြ ၊ ထိုမှ နည်းပြချုပ် ၊ ထို.နောက် ပြည်တော်ပြန် မာဂျန်က တစ်ဖန်ပြန်လည် ကိုင်တွယ်ခဲ့သည် ။
ရတနာပုံတွင် နောက်ခံလူ ဟက်ပီးနက်စ် ၊ ကွင်းလယ်လူ မက်ဆီမင် တို.ကိုသက်တမ်းတိုးထားပြီး တိုက်စစ်မှုး ဖိုဒေး ၊ သြစတေးလျ ကွင်းလယ်လူ ဂျိမ်းမေယာ တို.ကို အသစ်ခေါ်ထားပြီး ဧရာဝတီကစားသမား နန္ဒလင်းကျော်ချစ်ကိုပါ ခေါ်ယူထားခဲ့သလို တင်ဝင်းအောင် ၊ နေမျိုးအောင် ၊ ဇော်လင်းထွန်းတို.ကိုခေါ်ယူထားနိုင်ခဲ့သည် ။
ဧရာဝတီကမူ နိုင်ငံခြားကစားသမား ၄ ဦး စလုံးအသစ်ခေါ်ယူထားပြီး ပြည်တွင်းမှ ဗန်လားဟရွယ် ၊ အောင်ကျော်နိုင် ၊ ပြည်.ဖြိုးဦး ၊ ချစ်စမ်းမောင် ၊ သက်လွင်ဝင်း ၊ ထူးကျော် နှင်. ဇင်မျိုးအောင်တို.အသစ်ခေါ်ယူထားသဖြင်. အသင်းသစ် တစ်ခုနီးပါးဖြစ်နေသည် ။ထိုပွဲတွင် ပြည်ပကစားသမားများအနက် ဆစ်ဝမ်းဆက် ၊ အန်ဒါဆမ် ၊ နာမိုဗ်ရစ် တို.ထည်.သွင်းကစားခဲ့သည် ။
ချာရတီဖလားပြိုင်ပွဲ ဆိုသည်မှာ ပြီးခဲ့သော ဘောလုံးရာသီ တွင် အမှတ်ပေးချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့သော အသင်းနှင်. ရှုံးထွက်ဖလားချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့သော အသင်းတို.ကဘောလုံးရာသီသစ်တွင် ကွင်းဖွင်.ဖလားအဖြစ် ယှဉ်ပြိုင်စေပြီး ရရှိလာသော ကွင်းဝင်ကြေးများကို လှုဒါန်းသော ပွဲဖြစ်သည် ။
ထိုနေ.ကစားပွဲတွင် ဧရာဝတိထက် ရတနာပုံက ပ၇ိသတ်အင်အားပိုများသလို ကစားကွက်ပိုင်းတွင်လည်း သာသည်ဟုပြော၍ရသည် ။ ဧရာဝတီထက် အချိတ်အဆက် ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ ကစားနိုင်ခဲ့ပြီး ဂိုးကိုခြိမ်းခြောက်မှု အကြိမ်အရေအတွက် အတော်များများလုပ်နိုင်ခဲ့သော်လည်းရတနာပုံမှ ခေါ်ယူထားသော ဧရာဝတီဂိုးသမားအသစ် ဗန်လားဟရွယ်၏ လက်စွမ်းပြ ကာကွယ်မှုများကြောင်. ထင်တိုင်းမပေါက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည် ။ နောက်ခံကစားသမား ဆစ်ဝမ်းဆက် ကလည်း တစ်ဖက်တိုက်စစ်များကို ချေမှုန်းပစ်နိုင်သူတစ်ဦးဖြစ်သည် ။ထို.အတူ ရတနာပုံနောက်တန်းကစားသမား မက်ဆီမင်၏ စွမ်းဆောင်ရည်များကလည်း နဂိုကမှ တောင်.တောင်.တင်းတင်း မရှိလှသေးသော ဧရာဝတီတိုက်စစ်ကို ကောင်းကောင်းဟန်.တား ထားနိုင်ခဲ့သည် ။
အချိန်အတော်များများ ရတနာပုံအသင်း၏ တိုက်စစ်ဖိအားအောက် ဧရာဝတီရောက်နေရသော်လည်း ၅၈မိနစ်တွင် ရရှိလာသော အခွင်.အရေးကိုအထိရောက်ဆုံးအသုံးချခိုက် တစ်ဖက်အသင်းဂိုးသမားကြောင်. ဧရာဝတီအသင်း ပင်နတီကန်ခွင်.ရခဲ့သည် ။ ထိုပင်နတီကို ရစ္စတီက ဂိုးအဖြစ် အောင်မြင်စွာပြောင်းလဲပေးနိုင်ခဲ့ပြီး ထိုဂိုးသည်ပင် ဧရာဝတီင်္အတွက်ကွင်းဖွင်.ဖလားပိုင်ရှင်အဖြစ် ဒုတိယအကြိမ်ရောက်ရှိစေခဲ့ပြန်သည် ။
ဖလားရစေခဲ့သော ၅၈ မိနစ်
ထိုသွင်းဂိုးနောက်ပိုင်း ၀ယ်ဧရာဝင်္တီပ၇ိသတ်များအတွက် အသည်းတယားယား ရင်တစ်ဖိုဖို ဟူသော စကားလုံးဆိုလိုရင်းကို ကောင်းကောင်းသဘောပေါက်စေခဲ့ကြသည် ။ နာကျင်အချိန်ပို ၆မိနစ်ကလည်း ဧရာဝတီပ၇ိသတ်အတွက် အလွန်ရှည်ကြာလှသော အချိန်များ ဖြစ်ခဲ့သည် ။
မည်သို.ပင်ဆိုစေ အဆုံးသတ်တွင်တော. ဧရာဝတီ ပ၇ိသတ်တို. တစ်ခဲနက်ကြွေးကျော်အော်ဟစ်ခဲ့ကြသော ဧရာဝတီကို နိုင်ဖို.ကို ၁၀ နှစ် ၁၀မိုး ကြိုးစားလိုက်အုံး ဟူသော အသံများဖြင်. ၇တနာပုံကို အနိုင်ယူပြီး ကွင်းဖွင်.ဖလားပိုင်ရှင်အဖြစ် သို.ရောက်ရှိခဲ့သည် ။
ပွဲအပြီးတွင် ရရှိသော ကွင်းဝင်ကြေးများနှင်. MNL အသင်းများ၏ စုပေါင်းလှုဒါန်းငွေ များကို ကျိုက်ဝိုင်း မိဘမဲ့ကလေးကျောင်း ၊ မေတ္တာဝါဒီပရဟိတကျောင်း ၊ သာကေတမဟာဂန္ဒာရုံ မူလတန်းလွန်ကျောင်း၊ ၀ါးရုံပင်ဖောင်ဒေးရှင်းကျောင်း တို.အတွက် ၂၅ သိန်းစီလှုဒါန်းခဲ့ပြီး နေပြည်တော်အသင်းပိုင်ရှင် ဒေါက်တာဖြိုးကိုကိုတင်.ဆန်း မှ ဧရာဝတီအသင်းကို ဆုဖလားချီးမြှင်.ခဲ့ပါသည် ။
Redwave နှင်. ဧရာဝတီ ပ၇ိသတ်တို.၏ အပျော်
ဧရာဝတီကို နိုင်ဖို.ကို ……………………
Posted by မင်းသီဟ (Min Thiha) at 3:27 PM
Labels: Ayeyawady United FC, အားကစား